သူက ကျွန်မကို ချစ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်ပဲ …. – Shinyoon
သူက ကျွန်မကို ချစ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်ပဲ ….
ဒီအမှန်တရားကို ဝန်ခံဖို့ ကျွန်မ သတ္တိတွေ အများကြီးမွေးခဲ့ရတာပါ … သူ့အနားမှာကိုယ်ရှိနေပေမယ့်လဲ သူ့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်ရှိမနေခဲ့ဘူးလေ … သူ့စိတ်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့တာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက သူသိပ်ချစ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုပါ …
ကျွန်မကို ဘာလို့ချစ်ခဲ့တာလို့ အရင်ကတော့ မေးဖြစ်ခဲ့တယ် .. သူနဲ့သိပ်တူလို့တဲ့ အစားထိုးခံသက်သက်ပေါ့နော် … သူ သတိမရခဲ့တာတစ်ခုက ကျွန်မဆိုတဲ့ သူသိပ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေး မဟုတ်ခဲ့ဘူးလေ … တစ်ခုခုဆို အရင်တုန်းက ကောင်မလေးအကြောင်းအမြဲပါတယ်
ပြဿနာဖြစ်ပြီဆို … အရင်ကောင်မလေးက ဘယ်လိုနားလည်ပေးတဲ့အကြောင်း ခဏခဏပြောတယ် … သူ့ကို ဘယ်လောက် ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အကြောင်း မကြာခဏ ပြောတယ် … သိပ်လွမ်းနေရင် သွားလိုက်ပါတော့ဆိုပြီး လက်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်လဲ သူက ကိုယ့်လက်ကို မလွှတ်ပေးခဲ့ဘူးလေ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို သူမမြင်တတ်ခဲ့ဘူး … ကျွန်မ ဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့လဲ သူမသိတတ်ခဲ့ဘူး သူသိခဲ့တာ သူ့အနားမှာ မရှိတဲ့ အရင်တုန်းက ကောင်မလေးကိုပဲ လွမ်းနေတာလေ ကျွန်မ ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့လဲ သူမမြင်ဘူး ကျွန်မ ဘယ်လောက်နာကျင်နေမလဲ သူမစာနာဘူး
တကယ်တော့ သူ ကျွန်မကို ချစ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်ပဲလေ … တစ်စုံတစ်ယောက်နေရာမှာ ကျွန်မကို အစားထိုးဖို့သက်သက်ပဲ ပြီးတော့ အဲ့ဒီတစ်ယောက်နဲ့ တူအောင် ကျွန်မကို ပုံစံသွင်းချင်ရုံသက်သက်ပဲ ကျွန်မကို ချစ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်ပဲလေ ….
သူက ကြ်န္မကို ခ်စ္ခဲ့တာမွ မဟုတ္ပဲ ….
ဒီအမွန္တရားကို ၀န္ခံဖို့ ကြ်န္မ သတၱိေတြ အမ်ားၾကီးေမြးခဲ့ရတာပါ … သူ့အနားမွာကိုယ္ရွိေနေပမယ့္လဲ သူ့စိတ္ထဲမွာ ကိုယ္ရွိမေနခဲ့ဘူးေလ … သူ့စိတ္ထဲမွာ ရွိေနခဲ့တာ ဟုိးလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြတုန္းက သူသိပ္ခ်စ္ခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကိုပါ …
ကြ်န္မကို ဘာလို ့ခ်စ္ခဲ့တာလို့ အရင္ကေတာ့ ေမးျဖစ္ခဲ့တယ္ .. သူနဲ႕သိပ္တူလို့တဲ့ အစားထိုးခံသက္သက္ေပါ့ေနာ္ … သူ သတိမရခဲ့တာတစ္ခုက ကြ်န္္မဆိုတဲ့ သူသိပ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္မေလး မဟုတ္ခဲ့ဘူးေလ … တစ္ခုခုဆို အရင္တုန္းက ေကာင္မေလးအေၾကာင္းအျမဲပါတယ္
ျပႆနာျဖစ္ျပီဆို … အရင္ေကာင္မေလးက ဘယ္လုိနားလည္ေပးတဲ့အေၾကာင္း ခဏခဏေျပာတယ္ … သူ့ကုိ ဘယ္ေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့အေၾကာင္း မၾကာခဏ ေျပာတယ္ … သိပ္လြမ္းေနရင္ သြားလုိက္ပါေတာ့ဆုိျပီး လက္လြတ္ေပးခဲ့ေပမယ့္လဲ သူက ကိုယ့္လက္ကို မလႊတ္ေပးခဲ့ဘူးေလ
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ကို သူမျမင္တတ္ခဲ့ဘူး … ကြ်န္္မ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ခဲ့လဲ သူမသိတတ္ခဲ့ဘူး သူသိခဲ့တာ သူ့အနားမွာ မရွိတဲ့ အရင္တုန္္းက ေကာင္မေလးကိုပဲ လြမ္းေနတာေလ ကြ်န္မ ဘာေတြလုပ္ေပးခဲ့လဲ သူမျမင္ဘူး ကြ်န္္မ ဘယ္ေလာက္နာက်င္ေနမလဲ သူမစာနာဘူး
တကယ္ေတာ့ သူ ကြ်န္မကို ခ်စ္ခဲ့တာမွ မဟုတ္ပဲေလ … တစ္စံုတစ္ေယာက္ေနရာမွာ ကြ်န္မကို အစားထုိးဖို ့သက္သက္ပဲ ျပီးေတာ့ အဲ့ဒီတစ္ေယာက္နဲ႕ တူေအာင္ ကြ်န္မကို ပံုစံသြင္းခ်င္ရံုသက္သက္ပဲ ကြ်န္္မက္ုိ ခ်စ္ခဲ့တာမွ မဟုတ္ပဲေလ ….